राम्रो सेल्फी कसरी खिच्ने? ४ उपाय जान्नुहोस् - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राम्रो सेल्फी कसरी खिच्ने? ४ उपाय जान्नुहोस्
यदि तपार्इं सेल्फीको सोखिन हुनुहुन्छ भने यसका लागि केही एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसको माध्यमबाट तपाईंको सुन्दर सेल्फी खिँच्ने सपना पूरा हुनसक्छ।
प्रिज्मा (आइओएस र एन्ड्रोइड)
सेल्फीमा फरक–फरक इफेक्टका लागि प्रिज्मा सबैभन्दा उपयोगी एप हो। यो फोटो सम्पादन एप सबैभन्दा पहिले आइओएस प्रणालीका लागि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। छोटो अवधिमा निकै चर्चामा आएपछि एन्ड्रोइड प्रणालीमा पनि सपोर्ट गर्ने एप निर्माण गरियो। यसको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसारको सेल्फी खिँच्न सक्छन्।
फन्टब्याक (आइओएस र एन्ड्रोइड)
कैयौँ पटक हामी सेल्फी खिच्न चाहन्छौँ। तर, सामुन्ने रहेको ल्याण्डस्केप पनि छुटाउन चाहदैनौं। यस्तो अवस्थाका लागि यो उपयुक्त हुन्छ। यो एपको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले अगाडि र पछाडिका क्यामेराले फोटो खिँच्न सक्छन्। यो एपको माध्यमबाट सेल्फी लिँदा आसपासको सुन्दरलाई पनि सेल्फीमा समेट्न सकिन्छ।
युक्याम पर्फेक्ट (आइओएस र एन्ड्रोइड)
सेल्फी खिच्ने क्रममा अनावश्यक वस्तु आएमा यसले सेल्फीको मुड नै बिगारिदिन्छ। यही समस्या समाधान गर्न युक्याम पर्फेक्ट एप उपयोगी हुन्छ । यसको माध्यमबाट अनावश्यक वस्तुलाई हटाउन सकिन्छ।
क्यान्डी क्यामेरा (एन्ड्रोइड)
सेल्फीको भिडमा केही फरक देखिन केही राम्रा इफेक्टको आवश्यकता हुन्छ । यो एपको माध्यमबाट सेल्फीमा एक सय पिक्टर इफेक्ट र फिल्टर लगाउन सकिन्छ । नागरिकबाट